यी राशि भएका पुरुषले सुन्दर श्रीमती पाउँछन् ! | Sindhuli Saugat
यी राशि भएका पुरुषले सुन्दर श्रीमती पाउँछन् !
तुला राशि :– सुन्दर श्रीमती पाउनुलाई भाग्यसँग जोडिन्छ । र त्यसआधारमा तुला राशि भएका व्यक्ति सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् । तुला राशि भएका व्यक्ति धेरै इमोशनल र समझदार हुन्छन् । यस्ता राशि भएका व्यक्तिको प्रमुख विशेषता हो कि यीनिहरु आफ्नो पार्टनरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुन्छन् ।
कन्या राशिः– कन्या राशि भएका पुरुष धेरै सुन्दर हुने विश्वास छ । यस्तो राशि भएका व्यक्ति कुरा गर्नमा पनि सिपालु हुन्छन् । कन्या राशि भएका व्यक्तिमा खास गरेर केटीलाई पट्याउने अनौठो कला पनि हुन्छ । जसकारण उनीहरु सुन्दर केटीलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउन सफल हुन्छन् ।
कर्कट राशिः– शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार कर्कट राशि भएका व्यक्ति पनि भाग्यशाली मानिन्छन् । यो राशि भएका व्यक्ति धेरै दूरदर्शी हुन्छन् । यसको अतिरिक्त यो राशि भएका व्यक्ति भविश्यका लागि सजग पनि हुन्छन् ।
मकर राशिः– मकर राशि भएका व्यक्ति धेरै रोमान्टिक मानिन्छन् । आफ्नो पार्टनरलाई सरप्राइज दिन उनीहरुलाई विशेष ज्ञान हुन्छ । उनीहरु अचानक खुसी बनाउन पनि माहिर हुन्छन् । मकर राशि भएका व्यक्ति धेरै ‘क्यूट’ र रोमान्टिक व्यक्तित्वको हुन्छन् । जसकारण पनि केटीले यस्ता राशि भएका पुरुषलाई मन पराउँछन् ।
पछिल्लाे - पार्टी एकतापछिको अध्यक्षमा प्रचण्ड र माधव नेपालको टक्कर हुने
अघिल्लाे - हात्ती बाट सचेत रहौँ